Waaxda Ganacsiga Washington Caawinta Bulshada Reer Miyiga
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|U adeegida Bulshooyinka Reer Miyiga ah
U adeegida Bulshooyinka Reer Miyiga ah
Arimaha meel dhig horumarka dhaqaalaha. Bulshooyinka firfircoon - meelaha dadku rabaan inay ku noolaadaan, ka shaqeeyaan oo ka ciyaaraan - ayaa muhiim u ah koritaanka, soo jiidashada iyo haysashada dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo shaqooyinka. Horumarinta dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ayaa ah laba dhinac oo isku mid ah. Na weyddiiso sida Ganacsigu gacan uga geysan karo taageeridda yoolalkaaga.
Barnaamijyada ganacsiga waxay dhisaan bulshooyinka reer miyiga ah ee xoogga leh iyagoo gacan ka geysanaya sidii loo ilaalin lahaa guryo aamin ah oo la awoodi karo, iyagoo si aan toos ahayn iyo toosba u siinaya qoysaska u baahan, iyo siinta shakhsiyaadka iyo ganacsiyada gacanta musiibada
U Diyaargarowga Aafada iyo Soo Kabashada waxay siisaa ganacsiyada yaryar aaladaha qorshaynta ee ka caawin doona iyaga inay u diyaar garoobaan kana soo kabtaan masiibooyin dabiici ah iyo kuwo dad samee, laga soo bilaabo dhac iyo jabsi loo geysto dhoobo ama dhul gariir.
Gargaarka Degdegga ah waxaa si toos ah iyo si dadbanba u siiya ganacsatadu iyada oo loo marayo barnaamijyo iyo iskaashiyo kala duwan.
Adeegyada Bulshada ee Kahortagga Deeqaha waxay siisaa maalgelin, gargaar farsamo, iyo taageero kale hay'adaha waxqabadka bulshada ee gobolka oo dhan adeegyada loogu talagalay in lagu caawiyo yareynta saboolnimada, dib u soo nooleynta bulshada, iyo awood siinta qoysaska dakhligoodu hooseeyo si ay isugu filnaadaan.
Sanduuqa Amaanada Guryaha waxay bixisaa lacag mashruucyo guriyayn oo la awoodi karo iyadoo loo marayo hanaan codsi tartan ah, waxayna ku dhowaad $ 1 bilyan oo maalgelin ah ku bixisay waxayna gacan ka geysatay dhisidda ama dayactirka ku dhowaad 40,000 unugyo guryo la awoodi karo ah oo ka jira waddanka oo dhan.
Barnaamijyada ganacsigu waxay siiyaan bulshada caawinaad ku saabsan hagaajinta waxtarka xarumaha bulshada, horumarinta tamarta nadiifka ah, iyo kaalmada tamarta iyo cimilada ee qoysaska danyarta ah.
Waxtarka Tamarta iyo Barnaamijka Deeqaha Qoraxda abaalmarino deeqo tartan ah si loo yareeyo kharashka tamarta ee hay'adaha waxbarashada sare ee gobolka, xarumaha dowladda hoose iyo hay'adaha gobolka.
Barnaamijka Caawinta Tamarta Dakhliga-hoose waxay caawisaa shaqsiyaadka dakhligoodu hooseeyo si ay ula kulmaan baahiyahooda tamarta guriga ee ugu dhow.
Barnaamijka Cimilada Washington qandaraas la siiyaa barnaamijyada maxalliga ah in cimilada loo qoondeeyo guryaha iyo guryaha dabaqadda yar.
Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah waxay taageertaa horumarka, muujinta, iyo geynta teknoolojiyada tamarta nadiifka ah ee keydiya tamarta iyo yareynta kharashka tamarta. Puget Sound Energy waxaa la siiyay $ 3.8 milyan oo deeq ah si ay gacan uga geysato aasaasida isku-dubaridka batariga lithium-ion ee saldhiga miyiga Glacier. Craft3 waxay siisaa barnaamijyo amaah ganacsi tamar iyo deganaansho bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo ee miyiga iyo magaalooyinka.
Caawinta Ganacsiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha
Kooxaheennu waxay si dhow ula shaqeeyaan hoggaamiyeyaasha maxalliga ah si ay u siiyaan taageero xagga farsamada horumarinta dhaqaalaha, kor u qaadista ganacsiga yaryar iyo ganacsi abuurista iyo hagaajinta jawiga dhaqaale.
Hindisaha Ganacsiga Yaryar ee Reer Miyiga ah waxay lashaqeeysaa la-hawlgalayaasha maxalliga ah, gobolka, iyo federaalka si ay u bixiyaan gargaar farsamo oo gaar ah, helitaanka raasumaal, horumarinta shaqaalaha, suuqgeynta iyo tababarka.
Ganacsatada Reer Miyiga ee Soo Koraysa waxay bixisaa aqoon-isweydaarsiyo, shirar, tartamada qorshaha ganacsiga, hagitaan, ilaha websaydhka iyo qalabka elektiroonigga iyo daabacaadda.
Sanduuqa Flex ee Ganacsiga Yaryar waxay siisaa amaahda dulsaarka hooseeya ilaa $ 150,000 ganacsiyada u qalma.
Deeqaha Ganacsiga Yaryar waxaa marmar la siiyaa inay ka caawiso meheradaha inay dib u dhisaan, dib u bilaabaan oo ay ka soo kabtaan masiibada.
Xikmad Bilaabasho waxay siisaa ganacsatada iyo bilowgaba 27 fikradood oo ku saabsan helitaanka raasumaalka, laga soo bilaabo mid dhaqameedkii ilaa sanduuqii.
Buugga Ciyaaraha Yar Yar waa hage sahlan oo loo isticmaalo "sidee loo qabtaa" milkiilayaasha meheradaha.
Hindisaha Dhibcaha Ganacsiga Yaryar ee Washington waxay bixisaa ilo raasumaal oo dheeri ah iyada oo loo marayo Barnaamijka Taageerada Dammaanadda, Barnaamijka Helitaanka Raasamaalka, Sanduuqa Craft3 iyo Sanduuqa W.
Bisha Ganacsiga Caalamiga ah waa dhacdooyin taxane ah, websaydhyo, tartamo, boorro, bandhigyo, iyo fursado barasho oo kaa caawinaya inaad bilowdo ama aad kobciso ganacsi cusub.
Koorsada Kobcinta Dhaqaalaha Waqooyi Galbeed Waxay bixisaa tababar xoogan oo ku saabsan fikradaha aasaasiga ah, qaababka, iyo istaraatiijiyadaha horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah.
XuloWashington.com waa marinka shirkadaha doonaya inay ka helaan ama ballaariyaan Washington.
Dhoofinta Washington.com waxay ka caawisaa ganacsiyada yaryar inay ku xirmaan suuqyada shisheeye iyo ilaha ay ku koraan dhoofinta.
Qorshaynta Bulshada iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha
Barnaamijyada ganacsiga waxay bixiyaan qorsheyn iyo caawimaad farsamo bulshooyinka reer miyiga ah si kaabayaasha aasaasiga ah, iyo adeegyada dadweynaha iyo tas-hiilaadku u taageeri karaan koritaan waara iyo barwaaqo. Barnaamijyada kale ee Ganacsiga waxay bixiyaan abaalmarino iyo amaahyo si loo dhiso ama loo hagaajiyo xarumahan.
Adeegyada Maareynta Kobaca waxay siisaa deeqo qorshayn iyo kaalmo farsamo oo dawladaha hoose u suurta gelisa inay helaan kaabayaal dhaqaale oo ku filan si ay u waafajiyaan koritaanka loo qoondeeyey iyo fursadaha horumar dhaqaale iyadoo la ilaalinayo tayada nolosha.
Hindisaha Bulshooyinka Yaryar waxay siisaa kaalmo farsamo bulshooyinka miyiga, yar yar ee looga baahan yahay inay la kulmaan isla caafimaadka dadweynaha iyo waajibaadka bey'ad ee la siiyo magaalooyinka waaweyn marka la cusbooneysiinayo biyaha ay cabayaan iyo nidaamyada biyaha wasakhda ah.
Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada waxay maalgelin siisaa dawladaha hoose iyo qabaa'ilka ay dawladdu aqoonsan tahay ee kaabayaasha dadweynaha ee taageera kobaca ganacsiga iyo ballaadhinta. Mashaariicda uqalma maalgelinta CERB waxaa kamid ah biyaha gudaha iyo kuwa warshadaha, biyaha duufaanka, biyaha wasakhda ah, dhismayaasha dadweynaha, isgaarsiinta, iyo tas-hiilaadka dekedda iyo kuwa kale.
Guddiga Howlaha Guud waxay bixisaa amaahda dayactirka, bedelka, dhaqan celinta, iyo balaarinta nidaamyada kaabayaasha maxaliga ah si loo hubiyo caafimaadka bulshada iyo badbaadada, loo ilaaliyo deegaanka, kor loogu qaado jiritaanka dhaqaalaha, loona hubiyo waxqabadka nidaamka saxda ah.
Deeqaha Horumarinta Bulshada waxay deeqo siisaa dawladaha hoose ee miyiga ah si ay u horumariso dhaqaalaha, bulshada, iyo bay'ada jir ahaaneed isla markaana kor loogu qaado tayada nolosha dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Barnaamijku wuxuu maalgelin karaa howlo fara badan, oo ay ku jiraan bullaacadaha, biyaha, jidadka / jidadka iyo kaabayaasha kale; tas-hiilaadka bulshada; horumarinta dhaqaalaha; baxnaaninta guryaha; qorsheynta; iyo adeegyada bulshada.